Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Smart TV na-enye ụdị ihe nkiri ọhụrụ
Malite n'izu a, LG na-amalite iwepụta mmelite atụmatụ nke ga-enyere ndị ahịa LG 2020 na 2021 4K na K HUD Smart TV gburugburu ụwa nwee ike ilele ihe nkiri na usoro na Prime Video na ọnọdụ ihe nkiri ™, na-enye ha ohere ikiri. nweta ahụmahụ ka ndị okike ọdịnaya si zubere ya.
Emepụtara ọnọdụ onye na-eme ihe nkiri site na HUD Alliance, nke gụnyere ndị na-emepụta ngwa eletrọnịkị ndị ahịa ụwa, ụlọ ihe nkiri na ihe onyonyo, ndị na-ekesa ọdịnaya na ụlọ ọrụ teknụzụ, na-achọ ịhụ ahụmịhe nlele HUD kacha mma. Nke mbu ekpughere na 2019 wee gosi ya na LG TV na 2020, Emebere ihe onyonyo onyonyo iji chekwaa ebumnuche nke onye okike ọdịnaya, na-eweta ahụmịhe ilele ụlọ nso dị ka o kwere mee na mwepụta ihe nkiri n'ezie.
LG na Amazon na-ewere ugbu a n'ọhụụ ahụ n'ihu na ọdịnaya Prime Video agbakwunyere na mgbama na-ebute ọnọdụ onye na-eme ihe nkiri na-akpaghị aka na 4K na K HUD LG TV ụdị na-agba ọsọ webs 5.0 na webs 6.0. Ikike a maka TV dakọtara iji chọpụta ma mezie ntọala na ọnọdụ onye na-eme ihe nkiri na-enweghị mkpa ka onye na-ekiri ya gbanwee ntọala ahụ na aka ya bụ ụlọ ọrụ mbụ ma na-emeghe ụzọ maka TV n'ọdịnihu iji kwado ọrụ mgbasa ozi na-enweghị itinye usoro ndị ọzọ na ndị na-ekiri ya.
Ọ bụ ezie na njirimara nhazi foto dị ka ịhịa aka n'ahụ na ịkacha ihe oyiyi dị mma maka ọtụtụ ụdị ọdịnaya gụnyere egwuregwu na ihe nkiri TV, mgbe ụfọdụ, ha nwere ike ime ka ihe nkiri na-eme ka ọ dị ntakịrị nke ọma na nhazi nke ukwuu. Ọnọdụ onye na-eme ihe nkiri na-agbanyụ ntọala nhazi foto ọ bụla na-akpaghị aka nke nwere ike ime ka ihe nkiri nwee mmetụta na-ekwekọghị n'okike wee mee ka ha gosipụta dị iche iche ka ndị isi ha ga-achọ ka ha na-ejikwa akụkụ mbụ nke ihe nkiri ahụ, agba na ọnụego etiti maka ezigbo ahụmịhe. Ejikọtara ya na ndị ojii kachasị omimi, ọdịiche dịwanye mma na agba dị egwu nke TV dị elu nke ụkwụ, ndị na-ekiri ga-enweta omimi na eziokwu na-enweghị atụ site na nhọrọ fim na usoro nke Prime Video, gụnyere Amazon Original dị ka The Marvelous Oriakụ Mussel, The Boys, The Echi agha na nke ukwuu na-atụ anya na-abịa usoro The Wheel of Time premiering November 19. Otu-pịa ohere ka Prime Video ngwa na-nyere site na igodo ọkụ na ụkwụ Ime Anwansi Remote.
Na mgbakwunye na ịdị mma foto dị egwu, Leg's HUD TVs gụnyere ahịrị OILED TV ya dị egwu, na-anya isi n'ọtụtụ atụmatụ na-eme ka ahụmịhe ikiri sinima na-abawanye. Dolby Vision ™ IQ na-eji ọgụgụ isi na-ahazi ntọala foto dabere na ụdị ọdịnaya yana ọnọdụ ọkụ gburugburu, na-ebute ogo onyonyo kacha mma maka ihe nkiri ọ bụla na gburugburu ebe ọ bụla. Maka ụda dị elu, Dolby Atoms® na-enye ohere zuru ezu gburugburu nke na-enyere aka ihichapụ ndị na-ekiri ihe ọ bụla ha na-ekiri.